Sida Loo Sameeyo Sawirada Saamaynta Duotone ee Photoshop | Hal-abuurka khadka tooska ah
Sida naqshadeeyayaasha, goorma Isticmaalka sawirada mashaariicda naqshadeynta, waxaan aad ugu barannay tafatirka iyo dib u habeyntooda, si ay u isticmaalaan filtarrada kala duwan iyo saamaynta iyaga si ay u siiyaan muuqaal aad u cajiib ah.
Barnaamijyada tafatirka sawirku waxay na siinayaan xulashooyin badan oo aan ku dabaqno sawirradeena, laga bilaabo filtarrada madow iyo caddaanka, hagaajinta dhalaalka iyo isbarbardhigga, filtarrada midabka, iwm.
Ku saabsan kan dambe, oo ku saabsan filtarrada midabka, waa waxa aan maanta uga hadli doono boostadan, si gaar ah oo ku saabsan isbeddel muuqaal ah oo noqday moodada sanadka 2017, saamaynta duotone.
waanu ku bari doonaa sida loo abuuro sawirro leh saamaynta duotone ee Photoshop bilowga.
1 Waa maxay saamaynta duotone?
2 Talaabo talaabo ah saamaynta duotone ee Photoshop
Waa maxay saamaynta duotone?
Sida magaceedu muujinayo, waa sawiro ama sawiro laba midab oo kala duwan la isticmaalay. Waxay ka timid habka daabacaadda dhaqameed ee leh laba khad, kaliya laba khad ayaa la isticmaalay si loo dhimo kharashka, sababtoo ah laba saxan oo keliya ayaa loo baahnaa oo aan afar loo baahnayn midabada.
Dunida garaafyada, iyadoo la adeegsanayo farsamada duotone ayaa loo isticmaalaa, in lagu daro sawirada ama sawirada, shakhsiyad gaar ah, maadaama ay tahay naqshadeeyaha dooran kara midabada si uu ula shaqeeyo.
Laakiin dhammaan sawirada aan aragno si sax ah uma shaqeeyaan farsamadan.. Duotone-ka ayaa si fiican loogu dabaqaa sawirro fudud, sida sawir-qaadis, laakiin leh kala duwanaansho sare oo iftiinka iyo hooska ah, sidaas darteed saameyntu waa mid aad u muuqata.
Talaabo talaabo ah saamaynta duotone ee Photoshop
Mid ka mid ah siyaabaha ugu dhaqsaha badan uguna fudud ee lagu abuuri karo saameyntan waa iyada oo loo marayo barnaamijka tafatirka Adobe Photoshop, maadaama ay ugu mahadcelineyso qalabkeeda waxaan ka shaqeyn karnaa kanaalada sawirada iyo hagaajinta lakabka.
Waxa ugu horreeya ee ay tahay in aan haysano ka hor inta aan la furin barnaamijka waa sawirka aan ku shaqeyn doonno, kiiskeena waxaan la shaqeyn doonaa sawirka eeygan wanaagsan.
Ma aha inay noqdaan sawirro leh shuruudo kasta, laakiin isbarbardhigga badan ee sawirka noocan oo kale ah, ayaa ah mid aad u xoogan saamaynta duotone waxay ku jiri doontaa.
Marka aan helno sawirka aan ku shaqeyn doono, waxaan ku furi doonaa Photoshop, tallaabo muhiim ah ayaa ah in la helo lakabyada iyo kanaalada tabs ee ka shaqeeya barnaamijka.
Haddii aynaan haysan iyaga, waanu dhaqaajineynaa, aad bay u fududahay in la sameeyo, kaliya waa inaan tagnaa daaqada tab oo raadiyo xulashada lakabka iyo kanaalka oo guji iyaga.
Qeybta kanaalada, waxaa nala tusay in sawirka aan ku shaqeyneyno uu u qaybsan yahay afar kanaal oo kala duwan, dhinaca sawirka RGB, iyo kanaalada ka samaysan; casaan, cagaar iyo buluug. Haddii aan gujino mid ka mid ah, waxaan arki doonaa sida sawirkayagu isu beddelo.
Tallaabadan waxa ugu muhiimsan waa dooro kanaalka aan bixin wax ka duwanaansho badan, si marka la isticmaalayo saamaynta duotone waa mid aad u muuqata. Doorashada kanaalkan ayaa ku kala duwan sawir kasta, ma jiro mid ka shaqeeya dhammaan sawirada.
Xaaladeena, waa kanaalka buluuga ah, midka aan bixineynin farqiga ugu badan. Kanaalka aan dooranay waa in lagu shubaa sida xulashada, taas oo ah, waa inaad gujisaa kanaalka oo isla markaaba hoos u dhigtaa furaha xakamaynta ee kumbuyuutarkaaga. Markaad u hoggaansanto calaamadahan, xariiq jajaban ayaa ka muuqda sawirkayaga.
Talaabada xigta waa in aad aado qaybta lakabyada oo aad dooratid ikhtiyaarka hagaajinta lakabka midabka, ka dibna, menu-ka soo muuqda, dooro midab labis ah.
Isla markiiba ka dib markaad doorato xulashada midabka lebiska, daaqad ayaa furmaya si loo doorto midabka. Midabka aan hadda doorano, wuxuu noqon doonaa midka lagu dabaqo meelaha iftiinka ee sawirkeena.
Waxa aan kugula talineyno waa in aad isku daydo midabo kala duwan ilaa aad ka heleyso midka aad jeceshahay, haddii aadan horey u dooran midabadaas ka hor.
Xaaladeena, waxaanu codsan doonaa midab buluug ah, kaas oo u eg sidan. Marka aan helno midabka la doortay, kaliya waa inaan sameynaa riix badhanka aqbalaada dhanka midigta sare.
Hadda waxaan u soconaa mari midab labaad meelaha ugu mugdiga iyo hadhka ah ee sawirkeena. Si tan loo sameeyo, waxaan ku laabanaa lakabyada oo aan doorano lakabka meesha aan ku hayno sawirkayaga asalka ah. Waxaan dib u furaynaa xulashada hagaajinta lakabyada midabka, waxaana mar kale tilmaamaynaa midabka labbiska ah.
Daaqada ayaa mar kale furmi doonta halka waa in aan doorano midab kale meelahan mugdiga ah iyo hadhku. Sida aan arki karno, lakabyada lakabyada, mid cusub ayaa la sameeyay midabkan cusub ee aan dooran doono, kiiskeena midab buluug madow ah.
Waxyaabaha wanaagsan ee ku saabsan qalabkani waa haddii, sabab qaar ka mid ah, aadan jeclayn sida midabada la doortay u muuqdaan si ay u abuuraan saameynta duotone, waa la bedeli karaa. hab aad u fudud, kaliya waa inaad laba jeer gujisaa lakabka midabka ee aan rabno inaan bedelno. Laba jeer gujinta dib uma furayso shaashadda si aad u doorato midabka oo aad u awoodo inaad beddesho.
Haddii aad rabto in aad hal tallaabo hore u sii socoto, waxaad ku dari kartaa saamaynta gradient sawiradaada duotone.. Waa inaad si fudud u beddeshaa ikhtiyaarka midabka isku midka ah oo aad u beddesho khariidad gradient oo aad hagaajisid dheelitirka u dhexeeya midabada kala duwan.
Tillaabooyinkan fudud, waxaad awood u yeelan doontaa inaad sawirkaaga diyaar u tahay oo leh saamaynta duotone ee Photoshop. Aad bay muhiim u tahay in la xasuusto in marka la dooranayo kanaalka ka mid ah saddexda uu sawirku ina soo bandhigayo; buluug, casaan ama cagaar, waa inaan dooranaa midka ina siinaya kala duwanaansho la taaban karo.
Haddii aad la shaqaynayso sawiro kala duwan oo loogu talagalay mareegaha oo aad rabto in loo arko sidii set, saamaynta duotone waa qaab kuu ogolaanaya inaad midoobaan.
Waxaan rajeyneynaa in casharkan yar uu kaa caawin doono mustaqbalkaaga ama mashaariicdaada hadda. Sida marar badan aan kuu sheegno, waxaad haysataa sanduuqa faallooyinka si aad noogu soo weydiiso wixii su'aalo ah ama talooyin ku saabsan mawduucan aan ka hadalnay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Tricks » Sida Loo Sameeyo Sawirada Saamaynta Duotone ee Photoshop